Warka Shirkada - Page 1
Hoyga > Wararka > Warka Shirkada
Waxaad ubaahantahay waa tayo wanaagsan
Iyada oo balaadhinta isdaba-joogga ah ee warshadaha arjiga ee dhalaalaya bulk bulk, waxaa aqbalaya dad aad iyo aad u tiro badan. Shirkadaha badankood waxay mudnaanta siiyaan arrimaha tayada leh markay iibsanayaan pur-mashiinnada dhejiska kulul.
Ma ogtahay isbeddelada cusub ee imtixaanka gelitaanka kuleejka 2021?
Waxaa saameeyay cudurka faafa ee cusub sanadka 2020, waqtiga imtixaanka gelitaanka kuleejka dib ayaa loo dhigi doonaa laga bilaabo Juun 7-8 ilaa July 7-8, iyo qaar ka mid ah gobolada cusub ee imtixaanka gelitaanka kuleejka, waxay noqon doontaa July 7-10.
Nan'an Honglai Op Laydhka Co., Ltd.
Nan'an Honglai Oppu Laydhka & Laydhka Co., Ltd. waxay la tashatay siligga sanka shirkaddayadu markay ahayd 10-kii Maarso, iyadoo weydiisatay silig sanka loo marsado oo la tuuro, kaas oo leh saameyn aad u sarreeya oo ilaalin ah. Waxaa hadda jira 3mm oo dhan-caag ah, 3mm hal-gees ah, 3mm laba-gees, 3m......
Xalliyaan dhibaatada siligga sanka laga xiray ee macaamiisha
Bishii Maarso 9-keedii, waxaan ka helnay ogeysiis macmiilka Haomenglai in laba mashiin oo maaskaro cusub lagu daray lagu xiray siligga sanka inta lagu guda jiro qashin-saarka. Iibinta kadib shirkadda Xiaohuang ayaa isla markiiba u carartay shirkadda macaamiisha ee Haomenglai.
Ganacsiga dibadda ee waddankayga ayaa kordhay 32.2% labadii bilood ee ugu horreeyay
Maaddaama waddankaygu u sii furmayo adduunka dibedda, "saaxiibka saaxiibka" ee iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sii ballaaranaya, gaar ahaan sii xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee ay la leeyihiin waddamada ku teedsan "Belt and Road", taas oo ballaarisa booska horumarinta ee ganacsig......
Soo iibso gaari cusub!
Subaxnimadii hore ee maanta, waxaan maqlay in Mr. Zhang oo ka socda shirkadda uu soo iibsaday gaari Buick ah oo qiimihiisu yahay 180 kun yuan. Aad baan u farxay.